မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ်များ ရောင်းရန် | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - Pathein-Chaungthar Road (ပုသိမ်-ချောင်းသာလမ်းမ)
*Location – Pathein-ChaungThar Road, Pathein Township. *Price – 8000 Lakhs *Property Type — House(2.5RC) *Area — 3480 sqft *Rooms formation — 5-Master Bedrooms, 10-Normal Bedrooms, 5-Air Con, Living room and Kitchen. *Floor Type — Ceramic, 6-Bathrooms and ready to live located at Pathein…...
*Location – Pathein-ChaungThar Road, Pathein Township. *Price – 8000 Lakhs *Property Type — House(2.5RC) *Area — 3480 sqft *Rooms formation — 5-Master Bedrooms, 10-Normal Bedrooms, 5-Air Con, Living room and Kitchen. *Floor Type — Ceramic, 6-Bathrooms and ready to live located at Pathein…
ရောင်းရန် - အိမ်​​ရောင်းမည်​
ဟင်္သာတ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၄၀' ၆၀' မြေကွက် တိုက်သစ်နှစ်လုံးပါ ၂၅' ၃၀' တစ်ထပ်တိုက်သစ်တစ်လုံး (ရေချိုး ခန်း တစ်ခန်း၊ အိမ်သာတစ်ခန်း၊ ကြွေပြားကပ်ပြီး၊…...
၄၀' ၆၀' မြေကွက် တိုက်သစ်နှစ်လုံးပါ ၂၅' ၃၀' တစ်ထပ်တိုက်သစ်တစ်လုံး (ရေချိုး ခန်း တစ်ခန်း၊ အိမ်သာတစ်ခန်း၊ ကြွေပြားကပ်ပြီး၊…
Listed 22 January 2018
Advertiser : Thida
Phone no : 09425019975,09779203332
ရောင်းရန် - ချောင်းသာကမ်းခြေရှိ ၂ ထပ်ခွဲ RC တိုက်
*တည်နေရာ - ချောင်းသာ၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း *ဈေးနှုန်း - ၈၀၀၀ သိန်း *အမျိူးအစား - လုံးချင်းအိမ် (2.5RC) *အကျယ်အ၀န်း…...
*တည်နေရာ - ချောင်းသာ၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်း *ဈေးနှုန်း - ၈၀၀၀ သိန်း *အမျိူးအစား - လုံးချင်းအိမ် (2.5RC) *အကျယ်အ၀န်း…
Listed 8 September 2017
၃ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့် ကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိ
Asking Price : 9,000 သိန်း
ရောင်းရန် - ချောင်းသာကမ်းခြေနှင့်နီးသောနေရာကောင်းတွင်တည်းခိုခန်းရောင်းမည်
ကမ်းခြေသို့၃မိနစ်(Walk) ပုသိမ်ချောင်းသာလမ်းကြီးမေးတင် မြေ-40×80 အိမ်-34×50 Master Bedroom ACပါ-5ခန်း Double Room Fanပါ-10ခန်း ရေမီးphမီးစက်၂လုံး.လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများပါမည်.…...
ကမ်းခြေသို့၃မိနစ်(Walk) ပုသိမ်ချောင်းသာလမ်းကြီးမေးတင် မြေ-40×80 အိမ်-34×50 Master Bedroom ACပါ-5ခန်း Double Room Fanပါ-10ခန်း ရေမီးphမီးစက်၂လုံး.လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများပါမည်.…
Listed 19 August 2017
ရောင်းရန် - ချောင်းသာတည်းခိုခန်းအရောင်း
ကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီး(3မိနစ်)walk 5BR/10 Fan Double Rooms ရေမီးphမီးစက်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း...
ကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီး(3မိနစ်)walk 5BR/10 Fan Double Rooms ရေမီးphမီးစက်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း
ရောင်းရန် - ချောင်းသာတည်းခိုခန်းအရောင်းကမ်းခြေနှင့်အလွန်နီး
မြေ-40×80 အိမ်-34×50(RC) Beachသို့ဆင်းရန်3မိနစ်Walk...
မြေ-40×80 အိမ်-34×50(RC) Beachသို့ဆင်းရန်3မိနစ်Walk
Listed 10 August 2017
Si Thu Tun
Advertiser : Si Thu Tun
ရောင်းရန် - လုံးချင်းအိမ် နှင့် မြေကွက်
မြေကွက်ပိုပါသည် ဈေး သိန်း တစ်သောင်းနှစ် အထက် ...
မြေကွက်ပိုပါသည် ဈေး သိန်း တစ်သောင်းနှစ် အထက်
Listed 12 March 2017
Advertiser : ဦးစိုးဦး
Phone no : 09795168701
ရောင်းရန် - ပုသိမ်မြို့ ကမ်းနားလမ်း လုံးချင်းအိမ်
မြေကွက်ပိုပါသည်။ ဈေး သိန်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင် အထက်...
မြေကွက်ပိုပါသည်။ ဈေး သိန်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင် အထက်
ရောင်းရန် - လယ်​​ပေါ် ၁ လမ်း
အိမ်မဲ ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
Listed 29 March 2016
Advertiser : ကိုကို
Phone no : 263129497
ရောင်းရန် - ဂရမ်အမည်ပေါက်ခြံနှင်တိုက်ရောင်းမည်
Listed 29 January 2016
Advertiser : khinmyatnoe
Phone no : 09794524959
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဘိုကလေး ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဓနုဖြူ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် အိမ်မဲ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဟင်္သာတ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် အင်ဂပူ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ကန်ကြီးထောင့် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ကျိုက်လတ် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ကြံခင်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ကျောင်းကုန်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ကျုံပျော် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် လပွတ္တာ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် လေးမျက်နှာ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် မအူပင် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် မော်လမြိုင်ကျွန်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
မြန်အောင် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် မြောင်းမြ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ငပုတော ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ညောင်တုန်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ပန်းတနော် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ပုသိမ် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဖျာပုံ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
သာပေါင်း ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဝါးခယ်မ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ရေကြည် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဇလွန် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် တွမ်းဇံ ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ငွေဆောင် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒို
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်